अफ्रिकाबाट मानिस संसारभर कसरी फैलिए? | Nepal Newz
Home > नेपाली समाचारहरु > समाचार > अफ्रिकाबाट मानिस संसारभर कसरी फैलिए?
अफ्रिकाबाट मानिस संसारभर कसरी फैलिए?
संसारका कुना-कुनामा विभिन्न जातिका मानिस छरिएका छन्। उनीहरुको भाषा, संस्कृति र जीवनशैली फरक-फरक छन्। एकअर्कासँग अत्यन्त भिन्न पनि देखिन्छन्।
तर, वैज्ञानिक अनुसन्धानअनुसार उनीहरु हामीले सोचेजस्तो फरक छैनन्।
संसारभर छरिएका गैर-अफ्रिकी मानिस पनि ५० देखि ८० हजार वर्षअघि अफ्रिकाबाटै बसाइ सरेको एउटै मानव समूहका सन्तति भएको पछिल्लो अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। संसारका विभिन्न स्थानका हजार मानिसको डिएनए परीक्षणपश्चात वैज्ञानिकहरु उक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन्। उक्त अनुसन्धान नेचर जर्नलमा केही महिनाअघि प्रकाशित भएको थियो।
अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ हवाई’ले निर्माण गरेको एनिमेटेड भिडियोमा मानिस विगत १ लाख २५ हजार वर्षमा कसरी संसारभर छरिए भन्ने देखाउँछ।
यो भिडियोमा १ लाख २० हजार वर्षपहिले अरबियन पेनिनसुलामा बसेका मानिसका समूह देखिन्छन्। त्यसलाई पुरातात्विक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ।अनुसन्धानअनुसार बसाइसराइका लागि हिँडेका ती समूहका अधिकांशको मृत्यु भयो र उनीहरुको जिन आधुनिक मानिसमा सर्न पाएन।
तर लगभग ८० हजार वर्ष पहिले फेरि अफ्रिकाबाट बसाइसराइको निकै ठूलो लर्को लाग्यो। त्यसपछि मानिसर मध्यपूर्व र दक्षिणी एसियातर्फ फैलिए।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ड्याभिड रेइचका अनुसार संसारभर छरिएका आधुनिक मानवजातिका विभिन्न समूह र अफ्रिकाबाट त्यस समय बसाइसराइका निम्ति लर्को लाग्ने मानिसका जिन एकै प्रकारको पाइएको छ। यसबाट पुष्टि हुन्छ, संस्कृति र रुप-रङ्गमा फरक देखिए पनि र विभिन्न स्थानमा छरिए पनि आधुनिक मानव जातिको पुर्खा अफ्रिकाबाट लगभग ८० हजार वर्ष पहिले बसाईं सर्ने जातिको एउटै समूह हो।
अफ्रिकामा मानव जातिका पुर्खा लगभग २ लाख वर्षपहिले विभिन्न टुक्रामा विभाजन हुन सुरु गरेको पनि प्राध्यापक रेइचर र उक्त रिसर्चमा संग्लग्न अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएका छन्।
युनिभर्सिटी अफ वासिङ्गटनका जोसुवा आकेका अनुसार मानिसका पुर्खा एउटै अप्रवासीको एउटै समूहबाट संसारभर फैलिएको तथ्यले हाम्रा पुर्खा बारेको बुझाईमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। ‘मानव इतिहासको उक्त घटनाबारे हामी जति धेरै बुझ्न सक्छौं उति नै धेरै हामीले हाम्रो विगत पनि बुझ्दै जान्छौं,’ आके भन्छन्।
ती मानिस किन अफ्रिका बाहिर बसाईं सरे भन्नेबारे यकिन हुन सकेको छैन। त्यसमा विभिन्न अन्दाजहरु भने गरिएका छन्। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार उक्त बसाइसराइको सबैभन्दा प्रवल कारण जलवायु परिवर्तन वा त्यस्तै कुनै वातावरणीय प्रभाव हुन सक्छ।
इस्टोनिया बायोसेन्टरका अनुसन्धानकर्ता लुका पगेनी र मेइट मेट्सपालुका अनुसार पृथ्वीको परिक्रममा केही परिवर्तन भएपछि अहिले मरूभूमि भएका स्थलमा अत्यन्त धेरै वर्षा भयो र तापक्रम चिसियो। त्यसले मानिसलाई बसाइसराइ गर्न बाध्य पारेको हुनसक्ने उनीहरुको तर्क छ।
वातावरणमा आएको त्यस्तो उतारचढावले खानेपानी र हरियालीले भरिपूर्व ‘ग्रिन कोरिडर’ निर्माण गर्यो। ‘ग्रिन कोरिडर’ मा प्रशस्त खानेपानी र हरियाली थियो।
‘ग्रिन कोरिडर’ले मानवजाति बाँच्न प्रतिकूल अरेबियन पेनिनसुला र लेभान्ट क्षेत्रहरुलाई मानव अनुकूल क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्यो र बसाइसराइ सम्भव बनायो।
सुटिङबाट फर्कदै गर्दा नम्रता चढेको गाडी दुर्घटनामा